LG G5, nke a bụ modulu dị ike iji melite ọdịyo | Gam akporosis
LG G5, nke a bụ modulu dị ike iji melite ọdịyo
Alfonso de Frutos | | LG, MWC
LG juru anyị anya n'oge ngosi nke LG G5. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ akụrụngwa njirimara ya bụ ihe nzuzo, onye na-emepụta Korea nwere ihe ijuanya na-echere anyị: modul ndị nwere ike itinye na LG G5.
Ọ bụkwa na LG juru anyị anya site n'igosi smartphone ekwentị, na-enweghị ịbụ ụdị ekwentị Ara, na-enye anyị ohere dị mma. Na taa anyị na-egosi gị na vidiyo ndị dị ike modul iji melite ọdịyo nke LG G5.
LG Hi-Fi Plus na B&O Play, nke a bụ etu LG G5 audio module si arụ ọrụ
Onye na-ahụ maka igosi anyị etu igwe okwu ọdịyo a si arụ ọrụ maka LG G5 abụrụla Jairo Piñeiro, onye njikwa mpaghara LG, nke, dị ka ị hụworo na vidiyo, na-egosi anyị ihe nzuzo niile nke LG Hi-Fi Plus na egwuregwu B&O.
Ma ọ bụ na n'azụ aha a dị mgbagwoju anya enwere usoro na-adọrọ mmasị maka LG G5. LG Hi-Fi Plus na B&O Play modul, nke gbatịrị gafee ala nke ekwentị ahụ, na-abawanye oke ya ntakịrị ma na-edochi matte na ọla mechiri na ọchịchịrị ojii na otu, awade ọbụna elu ụda àgwà.
Mata na nke a modul ka na-eji ọkọlọtọ USB Type-C ọdụ ụgbọ mmiri, na mgbakwunye na mmepụta okwu na ihe ntanetị ọhụụ 3.5 nke na-etinye ihe ntụgharị dijitalụ.
Nkeji nke a 32 bit DAC, nke ụlọ ọrụ Danish bụ Bang & Olufsen mepụtara, na-akwado ntanetị ntanetị ntanetị maka faịlụ ọdịyo dị elu ma melite ogo nke ọ bụla 24-bit ọdịyo na 32-bit. O doro anya iji gwa ndiiche ị ga-eji ekwe ekwe dị elu, ma ule mbụ anyị na ụlọ ntu LG karịrị afọ ojuju.
Nkọwa mara mma na-abịa n'eziokwu na LG achọghị ịme ka modulu ya dị naanị na LG G5. Ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwere ike jikọọ LG Hi-Fi Plus na B&O Play modul ọ bụla Mac Os X, iPhone, iPad na o doro anya na gam akporo ngwaọrụ.
Anyị nwere mmasị na echiche nke modulu, ụzọ dị iche iche iji mepụta ma dị iche na ndị asọmpi gị. Eziokwu ahụ bụ na LG ejedebeghị modul ọdịyo ya na LG G5, na-enye ya ohere itinye ya na ekwentị ọ bụla na-eme ka ngwa a bụrụ nhọrọ na-atọ ụtọ n'ezie.
Ma gị, gịnị ka ị chere banyere LG G5 audio modul?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG G5, nke a bụ modulu dị ike iji melite ọdịyo
Venetian na-amaghị aha dijo
Na modul ahụ, ekwentị anaghị adabara n'ọnọdụ ya ka ọ bụrụ mgbe ịnwere, a gaghị echekwa ya 🙁
Zaghachi onye na-amaghị aha Venetian
Anyị na-egosi gị otu esi agbanwe modulu nke LG G5
Nke a bụ otú igwe foto Mydlink 180 si arụ ọrụ